November 3, 2010 — chiteainmet
အမေရိကန်နိုင်ငံက Jessica Cox ဟာမွေးကတည်းက လက်နှစ်ဖက်လုံး မပါရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒီလို မွေးရပါ ဒုက္ခတ တစ်ယောက်ဖြစ်သော်ညားလဲ စိတ်ပညာဖြင့် ဘွဲ့ရထားတဲ့သူမဟာ
စာရေးခြင်း၊ စာရိုက်ခြင်း၊ ကားမောင်းခြင်း၊ ခေါင်းလျှော်ခြင်း နှင့်
ဖုန်းပြောခြင်းတို့ကို သူမရဲ့ ခြေထောက်ဖြင့် အကုန်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Cox
ဟာ အကမယ်ဟောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်သလို တိုက်ကွမ်ဒိုအားကစား မှာလဲ ခါးပတ်
အနက်ရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ သူကိုတော့ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ပေးဖို့ အတွက်တော့
ကန့်သတ်ခြင်း ခံရပါတယ်။ သူဟာ လေယာဉ်ကိုမောင်းနိုင်သလို စာရိုက်တဲ့အခါမှာ
တစ်မိနစ်ကို ၂၅ လုံး အထိမြန်အောင်ရိုက်နိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမောင်းတဲ့လေယာဉ်အမျိုးအစားကတော့ Ercoupe လို့ခေါ်ပြီး ခြေနင်မပါရှိတဲ့
လေယာဉ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ လေယာဉ်ဝဲယာထိန်းပဲ့တက်ပြား ခြေနင်းမပါသော်လည်း
Jessica Cox ကတော့ ခြေထောက်နဲ့ လက်ကိုင်ကို ထိန်းပါတယ်။
အဲ့ဒီလေယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရဖို့ အတွက်တော့ ခြောက်လလောက် သူရဲ
ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျှော့ခဲ့ရပြီး အဆင့်သုံးဆင့်ကို သင်ကြားပြီး ၈၉ နာရီ
လေ့ကျင့်ပျံသန်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ လေယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ရရှိသွားတဲ့
ပထမဆုံး လက်နှစ်ဖက် မရှိတဲ့ လေယာဉ်မောင်းသူ တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို ကွန်ပြူတာ သုံးပါတယ်
နှံချပ်ကူ လဲကစားတတ်တယ်နော် လက်နှစ်ဖက်မရှိဘူးဆိုပြီး အနိုင်တော့လာမကျင့်နဲ့
သူများရေတာတွေချည်းပဲ ဖတ်နေရတော့ အားနာလာတယ်ဗျာ.အဲ…ကိုယ်ကိုတိုင်ကြတော့လည်း မရေးတတ်ဘူးလေ..ဒါနဲ့ပဲ အရင် ကျွန်တော် ရေခဲနန်းတော်မှာ တင်ခဲ့ဖူးတာလေးတွေ ပြန်တင်ရင်
ကောင်းမယ်လို့ စဉ်းစားမိတာနဲ့ တင်လိုက်တာပါ.ဖတ်ပြီးသားသူတွေကိုတော့ တောင်းပန်ပါတယ်..
နောက်လဲ ကျွန်တော်ကြိုက်တာလေးတွေ ဝေမျှခွင့်ပြုပါလို့…
Posted in ထူးထူးခြားခြား. LeaveaComment »
September 10, 2010 — chiteainmet
အဆိုတော် ဟဲလေးအတွက် ဇနီး မမြတ်သီရိလင်းက သားဦးလေး “We We” ကို ဇွန်လ (၁၅) ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊ ပန်းလှိုင် ဆေးရုံမှာ မွေးဖွားပေးခဲ့ပါတယ်။ သားဦးလေး မွေးတဲ့နေ့မှာဘဲ မလေးရှား ပြည်ပဖျော်ဖြေပွဲ အတွက် လာငှားကြတာကြောင့် လာဘ်ကောင်းတဲ့ သားလေးလို့ ဟဲလေးက ဆိုပါတယ်။
Posted in အနုပညာ. Tags: အဆိုတော်ဟဲလေး. LeaveaComment »
ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာနှင့် မင်းသမီး မြစံပယ်ငုံ
Posted in အနုပညာ. LeaveaComment »
September 9, 2010 — chiteainmet
အရင်ဆုံး Computer စတက်လာလာခြင်း Delete key ကို နှိပ်ပြီး BIOS ထဲ
” Power Management setup” ကနေ ” Resume by RTC Alarm” ကိုဝင်ပြီး (Enable) ပြောင်းလိုက်ပါ။
( တချို့ BIOS တွေမှာ တော့ Weakup Event setup လို့ပါလိမ့်ပါမယ်။)
ပြီးရင် ” Date ( of month ) Alram” သို့ ရွှေ့ပြီး ( Everyday ) လို့
ပြောင်းလိုက်ပါ။ တချို့ BIOS တွေကတော့
( Everyday ပြောင်းလို့မရပါဘူး မိမိ ဖွင့်ချင်တဲ့ ရက်ကို ရိုက်ထည့်ပေးရပါတယ်။)
ပြီးရင် “Time (hh:mm:ss) Alram” သို့ရွှေ့ပြီး မိမိ ထားချင်တဲ့ (hour. minutes,
seconds) တွေကို ရိုက်ထည့်ပါ။
ပြီးရင် Save ပြီး BIOS ကနေထွက်လိုက်ပါ။ဒါဆို ရပါပြီ။
သက်ဆိုင်ရာ Power Cable တွေကိုတော့ Auto Join ပေးထားဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်နော်။
Computer မှာ Passwords တွေပေးထားရင်တော့ computer က passwords
ရိုက်ရမယ့်နေရာ ရောက်ရင်တော့ ရှေ့ဆက်မသွားပဲ ထိုနေရာမှာပဲ
ကွန် ပြူ တာကို automatic timer နဲ့ဖွင့်တယ်ဆိုတော့ ရှင်း ကလည်း automatic shutdown timer code လေးအောက်မှ
ထည့်ပေးလိုက်တယ် ။အဖွင့်ရှိရင် အပိတ်လေးပါ တခါထည်းတွဲ ပြီး
ထည့်ပေးလိုက်တယ် cmd ကိုဖွင့်ပြီး ‘shutdown -s -t XXXX’
လို့ ရိုက်ပါ xxxx နေရမှာ computer ပိတ်ရန် မိမိ လိုခြင်တဲ့ အချိန် ကာလက
လေးကိုထည့်ပါ ။ ကွန်ပြူတာကို 20 minutes မှာမိတ်စေခြင်ရင် 1200 လို့
XXXXနေရမှာရိုက်လိုက်ပါ ။ အမှန် က ၂၀ မိနစ်ကို sec ဖွဲပြီး xxxx
နေရာမှာထည့်တာဖြစ်ပါတယ် ။သူက sec ပဲလက်ခံလို့ ပါ ။
အကယ်၍ shut down timer ကိုဖြုတ်ခြင်ရင် cmd ထည်းသွားပြီး shutdown -a လို့
အဲ့ setting ပြတ်သွားပါ မယ် ။
1, Foder တစ်ခုကို Password ပေးတော့မယ်ဆိုရင် ပထမဦးဆုံး Password ပေးတော့မယ်ဆိုရင် Foder တစ်ခုကို Right Click နဲ့အရင်နှိပ်ပါ။
2, Add to archive ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ။
3, Archive name and parameters ဆိုတဲ့ Box ကျလာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီဘောက်ထဲက Archive fomat ထဲက ZIP ကိုရွေးပါ။
4, ပြီရင် Advanced ထဲက Set Password ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ။ Password ပေးဖို့
Box တစ်ခုကျလာလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ Password ကိုပေးပြီး OK
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ DATA အချက်အလက်လေးတွေလုံခြုံသွားအောင် ဒီနည်းလေးအတိုင်းလုပ်ကြည့်လိုက်ပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
September 8, 2010 — chiteainmet
အပိတျပငျခံရတဲ့ အနုပညာသညျ တှေ
ရုပျရှငျ သရုပျဆောငျ ကိုကြျောသူ ဦးဆောငျ တဲ့ နာရေး ကူညီမှု အသငျး မှာ ကူညီ နကွေ တဲ့ ရုပျရှငျ သရုပျဆောငျ ၄ ဦးကို အကူအညီ သှားမပေးဖို့ ရုပျရှငျ အစညျး အရုံး က ပိတျပငျ လိုကျပါတယျ။
ပိတျပငျခံ ရတဲ့ ရုပျရှငျသရုပျဆောငျတှေ ကတော့ ဟာသ သရုပျဆောငျ ညီဂြျော၊ အမြိုးသမီး သရုပျဆောငျတှေ ဖွဈတဲ့ ဂှမျးပုံကွီး၊ သနျးသနျးစိုး နဲ့ ဆုရှနျးလဲ့ တို့ ဖွဈပါ တယျ။
သူတို့က ကိုကြျောသူ ဦးဆောငျတဲ့ နာရေးကူညီမှု အသငျး အသငျးသားတှေ အတှကျ ဖှငျ့လှဈ တဲ့ သရုပျဆောငျ သငျတနျးမှာ သှားရောကျ သရုပျပွ ကူညီနေ ကွတာ ဖွဈပါ တယျ။
“ သူတို့ အနုပညာသမားတှေ ဒီကိုလာပွီး လုပျအားပေးခှငျ့ကို ရုပျရှငျ အစညျးအရုံးက တားမွဈ တယျ၊ လုပျအားပေးခှငျ့ မပွုတာ ဖွဈတယျ” လို့ ရုပျရှငျ သရုပျဆောငျ ကိုကြျောသူ က ဘီဘီစီ ကို ပွောပွ ပါတယျ။
သူတို့ ရဲ့ နာရေး ကူညီမှု အသငျး ဟာ လူမှုရေး လုပျတဲ့ အသငျး ဖွဈကွောငျး၊ လူမှုရေး လုပျတာ ဟာ နိုငျငံရေး လုပျတာ မဟုတျတဲ့ အကွောငျး တိုငျးပွညျ ပုနျကနျဖို့ အတှကျ လုပျနေ တာ မဟုတျကွောငျး ၊ လူမှုရေး လုပျတာ လူတိုငျး လုပျခှငျ့ ရှိကွောငျး၊ ရုပျရှငျ အနု ပညာ သမားတှေ လူမှုရေး လုပျခှငျ့ ပိတျပငျတယျ ဆိုတာ တကယျတော့ လူမှုရေး ခေါငျးပါး အောငျ လုပျတာ နဲ့ အတူတူပဲ ဖွဈကွောငျး ရုပျရှငျ သရုပျဆောငျ ကိုကြျောသူ က ဘီဘီစီ ကို ပွောပွ ပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံ က အနုပညာသမားတှေ လူမှုရေး လုပျငနျးတှေ မှာ ပါဝငျ ဆောငျရှကျရငျ အာဏာပိုငျ တှေ ရဲ့ အခုလို ပိတျပငျ ခံရတာ တှေ ရှိ သလို အမွဲတစေ စောငျ့ကွညျ့ တာ ကို လညျး ခံနေ ရ ပါတယျ။
Posted in Civil News. LeaveaComment »